Vincent Kompany oo tilmaamay waxa uu u baahan yahay Hazard si uu u noqdo kan ugu fiican – Gool FM
Vincent Kompany oo tilmaamay waxa uu u baahan yahay Hazard si uu u noqdo kan ugu fiican
(Premier League) 07 Dis 2018. Difaaca kooxda Manchester City iyo xulka qaranka Belgian ee Vincent Kompany ayaa aaminsan in xiddiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Eden Hazard uu u baahan yahay inuu tababare xambaarsan qorsho weerar.
Hadalka difaaca kooxda Manchester City ee Vincent Kompany ayaa wuxuu imaanayaa, kahor kulanka ay kooxaha Sky Blues iyo Chelsea ku wada ciyaari doonaan bari horyaalka Premier League, kaasoo ka tirsan kulamada 16-aad.
Manchester City ayaa hogaanka u heysa horyaalka Premier League ka dib 15 kulan ilaa iyo haatan laga soo ciyaaray waxayna uruursatay 41 dhibcood, waxayna 2 dhibcood ka sareeyaan Liverpool ee ku jirta booska 2-aad.
Hadaba kahor kulanka la wada sugayo ee kooxaha Chelsea iyo Manchester City ayuu difaaca reer Belgian ee Vincent Kompany la wadaagay saxaafada:
“Waxaan u maleynayaa in Eden Hazard uu u baahan yahay macalinka qaab weerar ah”
“Macalinka sidaas ah, waa waxa uu u baahan yahay, iyadoo aan loo fiirin doonin meesha uu joogo, si uu u soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa ugu fiican, mustaqbalkana wuu u iftiimayaa isaga”.
Si kastaba kooxaha Chelsea iyo Manchester City ayaa bari ku wada balasnsan inay ku wada ciyaaraan garoonka Stamford Bridge, mid ka mid ah kulamada kulamada 16-aad ee horyaalka Premier League.